Added by manawphyulay on May 23, 2008 at 7:05pm —
လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ် အိုင်တီရဲ့ရိုက်ခတ်မှုသြဇာအရှိန်အ၀ါက တာသွားလှတယ်။
အိုင်တီရဲ့သြဇာဟာ တစ်ဦးချင်း တစ်ယောက်ချင်းကိုလည်း ရိုက်ခတ်တယ်။
နောက်ပြီးလူ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ရပ်လုံးကိုလည်း ရိုက်ခံတယ်။ ဒါပေမဲ့
အိုင်တီရဲ့ရိုက်ခတ်မှုသြဇာဟာလူတစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး အပေါ်ကျတော့ တူညီမှု
Added by manawphyulay on May 20, 2008 at 9:54am —
No Comments E-dialect အီလက်ထရောနစ်ဒေသိယစကား
တစ်ခါက လင်မယားနှစ်ယောက် စကားအချေအတင်ပြောကြသတဲ့။ အဲ ယောက်ျား ဖြစ်သူက
computer crazy၊ မိန်းမဖြစ်တဲ့သူကတော့ ဒီယောက်ျား ငါ့ကိုတော့
ကွန်ပျူတာလောက် အလေးမထားဘူးဆိုပြီး စကားနာထိုးတဲ့ စကားစစ်ပွဲတစ်ခု
ဖန်တီးတဲ့အကြောင်းအရာလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ... သူတို့ နှစ်ယောက်ပြောတဲ့ စကား တွေကို ကြည့်ကြပါဦးနော်။
မိန်းမ။ ။ ကျွန်မကို crazy အင်္ကျီလှလှလေးဝယ်ပေးမယ်ဆိုပြီး အခု… Continue
Added by manawphyulay on May 20, 2008 at 9:51am —
Added by manawphyulay on May 12, 2008 at 10:46am —
No Comments နာဂစ်၏ ပြင်းထန်သော အမှတ်တမဲ့ရိုက်ချက်
နာဂစ်ရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ရိုက်ချက်ရင်မချိအောင် ခံခဲ့ရလူအများ သေကြေပျက်စီးကြဒါဟာ လောကဓံတရားကို အံတုလို့ရမလားမဖိတ်ခေါ်ပဲ လူအများဆီ သေခြင်းတရားရောက်ရှိလာခဲ့… Continue
Added by manawphyulay on May 12, 2008 at 10:33am —
Relief International (RI) is assessing the extent of the damage and evaluating appropriate emergency response strategies to provide aid, followingamassive Category3cyclone in southeast Myanmar. At least 22,000 people
are dead, with the death toll expected to reach 50,000. Hundreds of
Added by manawphyulay on May 10, 2008 at 9:52am —
No Comments မြန်မာပြည်အတွင်း မုန်တိုင်းကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေ များခြင်း
Added by manawphyulay on May 8, 2008 at 6:00pm —
No Comments နာဂစ်မုန်တိုင်းနောက်ဆက်တွဲ
နာဂစ်မုန်တိုင်းဓာတ်ပုံများကို လာရောက်ကြည်.ရှုပြီး နီးစပ်ရာအဆက်အသွယ်မှတစ်ဆင်. ကူညီကြပါ။
www.kjohnblog.com Added by kjohn on May 8, 2008 at 5:54pm —
No Comments BURMA/MYANMAR: CYCLONE NARGIS APPEALS
No Comments Another source to help...
Subject: Calling for your helpDear Friends,My name is Honeyhline Oo and I amafounder of Golden Land Charity Program(under my Dad's Golden Land Travel Agency). I am writing to ask for yourhelp to raise money for the victims asaresult of Cyclone Nargis that sweptthrough Myanmar late last week.Your donation today will directly help alleviate the suffering of Burmesehomeless people. My Dad has been already helping people from Yangon andVillage… Continue
Added by Ko Chit on May 7, 2008 at 2:30am —
No Comments မြန်မာပြည်သူများကို ကူညီမယ်ဆိုရင်
This article is from http://padaukmyay.blogspot.com/ and written by Ko Phoe Maung.
ပြည်ပရောက်စေတနာရှင်များအဖို့ အလွယ်ကူဆုံးလုပ်နိုင်တာက Online Donation ပါ်။ မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ပြည်တွင်းကို ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်ဖို့ဆိုတာလည်း လက်ရှိအခြေအနေမှာ ခက်ခဲလွန်းနေပါတယ်။ အစိုးရကလည်း နိုင်ငံတကာ အကူအညီတောင်းခံထားတော့ NGOs, UN Agencies များကနေ တဆင့် လှူဒါန်းခြင်းကလည်း မုန်တိုင်းဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့ ပြည်သူတွေကို အထိရောက်ဆုံး လတ်တလော ကူညီနိုင်မယ့် နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။… Continue
Added by swe lin htoo aung on May 6, 2008 at 8:03pm —
No Comments Direct Help to Myanmar - By Mahasi USA - America Burma Buddhist Association (ABBA)
Please Visit: http://www.mahasiusa.org/cyclone.html
Added by Ko Chit on May 6, 2008 at 7:43pm —
No Comments အမေ
* အမေ့ အင်္ကျီက
ချွေးနံ့လေးတွေက အကျော်ကြားဆုံးဆိုတဲ့ ရေမွှေးတွေထက် သင်းပျံ့ပါတယ် ..။*
သူများတွေ ဘယ်လောက်ချောချော အကျဉ်းတန်တဲ့ ကိုယ့်သားသမီးလေးကို ပိုချစ်တာ အမေပါ
..။* အမေအော်သမျှ ငေါက်သမျှတွေဟာ ကောင်းစေ တော်စေ ကျော်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေနဲ့ပါ
..။* သူများချစ်တယ်ဆိုတာ အမေမုန်းသလောက်ပဲ ရှိပါတယ် ..။* ငယ်စဉ် ကလေးဘ၀
အမေ့ရင်ကို ခြေနဲ့ကန်ခဲ့စဉ်က အမေကတော့ ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ ချစ်မြဲချစ်ခဲ့တာပါ
..။* ကြီးလာတဲ့အခါ အမေက စေတနာနဲ့ မာန်မဲတာကို ကိုယ်က မဲ့ရွဲ့ပြီး… Continue
Added by manawthar on May 4, 2008 at 3:51pm —
No Comments အဖေ
* ဖေချစ်တို့ ဖေခင်တို့
ဆိုတာ ရှိတော့ ရှိတယ် ရှားတယ်ဆိုတာမျိုးလိုပါ ။* အလုပ်မှာ တစ်နေကုန်နေရတော့
အဖေ့ကို နေ့စဉ် ရင်ခွင်ပိုက် နို့ချိုတိုက်ခဲ့တဲ့ အမေ့လောက်တော့ ချစ်အားမပိုတာ
ဓမ္မတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။* အဖေဆိုတာလည်း သားသမီးကို ချစ်လျက်နဲ့ ကြောက်အောင်
နေပြရတဲ့ ဖန်တီးရှင်မဟုတ်ပါလား ။* ဒါပေမဲ့ အဖေသာ ရှင်ဘုရင်ကြီးဖြစ်ခဲ့ရင်
သားသမီးတွေဟာ အိမ်ရှေ့စံမင်းသား ၊ မင်းသမီးလေးတွေ ဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့ ။* အဖေက
ချမ်းသာကြွယ်ဝပြန်တော့လဲ သူဌေးသားသမီးတွေ ဖြစ်ပြန်တာပဲ မဟုတ်လား ။*… Continue